“नेपालीहरु जङ्गबहादुरको पाला देखि जड्याँहा” « रिपोर्टर्स नेपाल
“नेपालीहरु जङ्गबहादुरको पाला देखि जड्याँहा”
प्रकाशित मिति : 2019 October 8, 11:42 am
नेपालीहरु जङ्गबहादुरको पाला देखि निकै जाँड खाने रहेछन् । निक रमाइलो गर्नुपर्ने स्वभावका भएपनि जाँड खाएर हल्लनुपर्ने ।
सन् १८७५ मा नेपालमा आएका रुसी नागरिक इभान पाभ्लोभिच मिनाएभले नेपालका विपन्न समुदाय देखि संभ्रान्तहरुको जाँड खाएर हल्लनुपर्ने स्वभावबारे यात्रावर्णनमा उल्लेख गरेका छन् । उनी नेपाल आउँदा जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री थिए ।
नेपालीहरुलाई निकै रसिला पाए उनले । हँसमुख र दयालु देखे । तर, नेपाल भ्रमणको अनुभवबारे यात्रावर्णनमा नेपालीहरुलाई जड्याहा देखे ।
केही अपवाद छाडेर सबै जना जाँडरक्सी खान्छन्, मिनाएभले लेखेका छन् । यतिसम्मकी शिक्षकले समेत विद्यार्थीलाई रक्सीको व्यवस्था गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “नेपालका बेरोनेटका छोराहरुलाई शिक्षा दिन भर्ना गरिएका अंग्रेजी शिक्षक आफ्ना शिष्यहरुको शिक्षादिक्षामा भन्दा उनीहरुको निम्ति सोमरस अर्थात् कोन्याकरक्सी जुटाउनमा संलग्न रहेको देखिन्छन् ।”
शिक्षक नै रक्सी व्यवस्थापनको पेशामा संलग्न थिए । रक्सी व्यापार गरेर धनी बनेका थिए । उनले काठमाडौंलाई जड्याहाहरुको शहरका रुपमा इंकित गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, काठमाडौंका सडकहरुमा के उत्सव, के साधारण दिन, सधैं रक्सी लागेका मानिसहरुलाई देख्न सकिन्छ ।
सन् १८७५ मा नेपाल आएका इभान पाभ्लोभिच मिनाएभले नेपालमा देखे भोगेको विषय यात्रावर्णनमा उल्लेख गरे । रुसी नागरिक उनी त्यतिबेला नेपाल आउने थोरै यूरोपेलीमध्यका हुन् ।
बिरालोलाई लात हान्दा १० वर्ष जेल सजाय !
ग्रीस, २१ वैशाख : इभिया टापुको समुद्री किनारको रेस्टुरेन्टमा तीन जना मानिस बाहिर खाना खाइरहेका
रातको ११ बजे दश किलोमिटर दौडेर कामबाट घर फर्कने किशोर (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ९ चैत । उनी हरेक दिन राति कामबाट फर्कदा राति छिप्पी सकेको हुन्थ्यो ।
प्रकाशचन्द्र लोहनीको ४ करोड बैंकमा रहेको खुलासा भएपछि…
काठमाडौं, २२ फागुन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बैंक खातासम्बन्धी
घरमा हिमभालुको रजाईँ
एजेन्सी, १० माघ । मानिस बस्न छाडेको घर र बस्ती कस्तो हुन्छ भन्ने रुसमा एकजना
श्रीमान बलात्कार गर्ने श्रीमती भिडियो खिच्ने
श्रीमतीको अगाडि महिलालाई बलात्कार गर्ने, छोरीलाई पनि बलात्कार गर्न खोज्ने, डेढ करोड असुल्ने दम्पती पक्राउ
भारतमा यी जोडीले अनलाईनमार्फत् विहे गर्दै, तीन सय जनालाई अनलाईन निम्तो
काठमाडौँ, ८ माघ । विश्व भर कोरोना भाइरसको त्रास भइरहेको बेला एक जोडीले अनलाइनमार्फत् विवाह
किच्कन्या छ ?
किच्कन्याको काल्पनिक कथाहरु बनेका छन् । राजा महाराजासँग जोडेर किचकन्याको कथा बनाइएका छन् । तर,
अन्टार्टिकामा पाइने हिमाली लाटोकोशेरो वासिंगटन घुम्दै
एजेन्सी, पुस २९ । अन्टार्टिका महादेशमा मात्र पाइने दुर्लभ लाटोकोशेर अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डीसीमा नै
मतगणनास्थलको तयारी पूरा, सिसी क्यामेरासहित तारजालीको व्यवस्था
काठमाडौँ,२८ वैशाख । सुरक्षित तरिकाले मतगणना गर्नका लागि बागलुङका मतगणनास्थलमा तयारी गरिएको छ । बागलुङका
राजदूत शर्माले भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
काठमाडौं, २८ वैशाख । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र भारतका